SIDA LOO SAMEEYO SARIIRO DIIRAN LEH GACMAHAAGA: TALAABO TALAABO KU SAMEE SAWIRRO - INFRASTRUCTURE
Mid ka mid ah arrimaha saameynaya bilowga beeridda, iyo sidoo kale koritaanka iyo horumarinta dhirta la beeray, waa heerkulka dhulka furan. Muddo hal xilli ah, seddex ama xitaa afar dheraad ah oo sare ah oo dalagyada beerta kala duwan oo ka mid ah aagga ayaa laga heli karaa sariiro diiran, taas oo si fudud loo xallin karo gacmahaaga. Isla mar ahaantaana, bacriminta carrada ee ay ku yaalaan waa mid aan muhiim ahayn, iyo qalab jaban oo jaban ayaa loo isticmaalaa dhismahooda.
Isticmaalka sariirta beerta diiran ee guga la sameeyey xilliga gu'ga ee abuurista hore ee cagaarka, dabacasaha, qajaarka, yaanyada, bocorka iyo dalagyada beerta kale waxay u ogolyihiin xilliga beerta inay bilaabaan 2-3 toddobaad ka hor inta caadiga ah. Sida muuqaalka kulaylka ah ee ciidda si gaar ah loo diyaariyay sababtoo ah joogitaanka miirashada walxaha dabiiciga ah ee ku jira meel bannaan. Inta lagu jiro kala-soocidda, sida geeddi-socodka kiimikada kale ee firfircoon, kulaylka ayaa la soo saaraa, kaas oo lagu hayo heer joogto ah muddo dheer iyadoo la eegayo xaddiga isdhexgalka ee jawiga dibadda.
Muddada saameynta kuleylka ee dhulka ku xiran tahay xaddiga qalabka jilicsan iyo cufnaanta. Waxaa cad in mugga weyn iyo cufnaanta arimaha bakeeriga ah, ay sii dheeraato, iyo marka loo eego, wakhtiga dhulka lagu kululeeyo si toos ah waxay ku xiran tahay labada arrimood.
Ma taqaanaa? Fikradda ah isticmaalka kuleylka dabiiciga ah ee dabiiciga ah wuxuu ka soo jeedaa indha-indheynta dhagxaanta dufanka iyo geedaha compost. Xataa barafka iyo barafka barafka leh, marna ma lagu daboolay barafka, waxay ku dillaaceen iyaga, taas oo muujinaysa heerkul gudaha oo kordhay.
Fursadaha sariiraha diiran
Waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo sariiro madaxbanaan oo kulul:
Ku-meelgaar ah. Hayso qaab-daloolo qaylo-dheer oo qaylo-dheer leh oo aan lahayn diyaargarow dheeraad ah. Bilowgii ayaa loo isticmaalaa geedo sii kordhaya, ka dibna la jaanqaadaan heerka guud ee beerta iyo beeray dalagyada ugu muhiimsan.
Joogta. Waxay yihiin godad ama sanduuqyo, kuwaas oo laga sameeyay boodhka, kabadhada, lebbiska, marmar dhif ah oo caleemo bir ah. Naqshadeynta beeraha beeraha waaweyn ee 3-5 sano.
Qalabka joogtada ah ayaa loo qaybiyaa noocyada soo socda:
Qoto dheer. Cuntada dherer aan ku haboonayn, leh ama aan lahayn wax xajin, ilaa 60 cm qoto dheer iyo 1.1 ilaa 1.5 m ballaaran.
Ground. Gacmo qashinka leh nasasho yar oo dhulka ah (illaa 10 cm), oo leh dhinacyo hoose oo ka samaysan dhagax, leben, qoryo, 90-110 cm ballaaran iyo 30 illaa 50 cm oo sare ah qaabka buurta qaabka wareegga wareega ah, trapezium, Piramid.
Deyr (kore). Xulashada ugu fudud waa sanduuqa laymanka ah ee looxyada alwaaxda iyo saqafka leh dhererka 40 illaa 60 cm, dhererka 4 ilaa 12 m iyo width 1 m.
Haddii aad xiiseyneyso sida sariir diiran loogu sameeyo qajaarka ama yaanyada hore ee berrinka bannaan, waa inaad bilowdid ikhtiyaarka nooca sariirta ugu haboon ee aag gaar ah. Goobaha qoyan ee cimilada iyo qabowga waxay ku haboon yihiin meel sare. Gobollada qallalan iyo kuwa hawada leh ee carrada saboolka ah waxaa ka sii wanaagsan in ay ku noolaadaan hab qoto dheer oo habaysan. Iyo aagga diimeed oo leh carrada madow, kala duwanaanshaha muuqaalku waa mid ku habboon.
Waa muhiim! Qodob qoto dheer oo leh mugga ballaaran ee maaddada organic muddo dheer ayaa si fiican u diirisaa kuleylka iyada oo taageero laga helayo qoyaan ku filan.
Sida sariirta u sameyso gacmahaaga
Qirashada tiknoolajiyada dhirta beerta sii kordhaysa ee sariiraha diirran ee nooca sarraysa, oo lagu sameeyo gacmahaaga, waxaa lagula talinayaa in la bilaabo soo saarida tallaabo tallaabo ee hal sanduuq oo alwaax ah. Si aad u abuurto, waxaad u baahan tahay qalab sahlan oo guriga dhexdiisa ah, qoryaha hore loo goostay iyo qadar yar oo waqti ah. Sanduuqa wuxuu yeelan doonaa cabbir guud: width 1 m, dherer 6 m, dherer 34 cm.
In soo saarista iyo rakibidda sanduuqyada loo isticmaalo qalabka sida:
shidaal ama fiilo korantada;
ciddiyaha ama nalka;
hacksaw for alwaax;
dhoobada dhulka ama isha.
Maaddooyinka ayaa u adeegi doona:
kuraasta geed, 25 mm weyn, 18 cm ballaaran, 6 iyo 1 m dheer (4 gogo kasta);
baararka, qaybta 40x40 mm, dhererka 73 mm (8 gogo ') iyo qaybta 20x40 mm, dherer 10 cm (4 gogo').
Sharax kooban oo ku saabsan shaqada, oo tusaya sida aad u samayn karto sariirta diiran ee cagaarka, salaar, iyo qajaarka leh beeritaanka guga hore, ma ahan dogma. Tusaalahan waxay muujineysaa in geeddi-socodku uu fudud yahay, uma baahna waqti badan iyo kharashka dhaqaalaha.
Shaqada, waxaad ubaahan tahay hannaan hareeraysan oo loogu talagalay meeleynta bilaashka ah iyo dhaqdhaqaaqa walxaha dherer weyn. Sidaas awgeed:
Guddi dhererkiisu yahay 1 m ayaa la gooyaa (darajooyinka waa in lagu calaamadeeyaa leydi ka hor goynta).
Guddiga labaad waxaa loo adeegsadaa kan ugu horreeya oo leh waji hal waji ah, labadaba waxaa lagu dhejiyaa baqshiimo (ciddiyo) oo leh laba cisho oo gaaban, kuwaas oo ku yaala isugeynta gudaha ee gudaha.
Guddiga labaad waxaa la gooyaa jajab ah ilaa heerka ugu horreeya.
Qiyaasta ugu horeysa ee looxyo 360h1000 mm ayaa diyaar ah.
Isla sidaas oo kale wuxuu sameeyay dhinaca cidhiidhiga labaad ee sanduuqa.
Siddeed sideed qiyaasood ayaa lagu fiiqi karaa fiilo hal dhinac ah, tan iyo mustaqbalka waxay fulinayaan hawsha aan ahayn oo keliya xakamaynta, laakiin sidoo kale waxay taageertaa dhajimaha.
Afar wareeg oo lix mitir ah ayaa la goostay oo lagu dhajiyay laba lammaane oo leh baararka dheer iyadoo la isticmaalayo tuubooyin isku dhafan ama ciddiyaha. Dhamaadka dhammaadka taakulaynta (taakulaynta) waa inaysan ka soo bixin meel ka baxsan xuddunta guddiga. Buulka ugu horreeya waxa la qabtaa bilawga bilawga ah, oo la socdo dhammaadka. Kadibna, laba mitir kasta, barka xiga waa la dhajiyay bilawga illaa dhamaadka dariiqa.
Laba dhinac oo ka mid ah size size 360x6000 mm diyaar ah.
Dhinacyada iyo sariiraha sariirta mustaqbalka ayaa lagu rinjiyeeyaa gudaha iyo dibedda rinjiga (dhalada), taas oo ah mid aan khafiif ahayn.
Ka dib markii rinjiga la qalajiyey, sanduuqgu wuxuu diyaar u yahay rakibaadda goobta.
Waa muhiim! Guddiga waa in lagu iibsadaa 15-20 cm ka badan kuwa la xisaabiyey, maadaama ay u baahan doonaan in lagu dhajiyo wareegga si ay u siiyaan sanduuqa qaab qaabeysan joomatari.
Ku rakibida iyo buuxinta
Ka dib marka la soo saaro iyo rinjiyeynta dhinacyada sanduuqa talaabooyinka soo socda:
Bannaanka waxaa loo wareejin doonaa goobaha waxaana lagu dhejiyaa calaamadaha la sameeyay iyadoo la adeegsanayo qiyaasta cajalad.
Iyada oo la adeegsanayo matxaf ama waraaqda, godadka waxaa lagu qodaa xarumaha taageerada ee dhinacyada dheer, qoto dheer oo ah 35 cm. Dhinaca dheer ee dheeraadka ah waxaa lagu rakibay oo heerkulbeeyey iyadoo la isticmaalayo heer, dhinaca gaaban ayaa ku xiran, ka dibna goobada.
Ka dib marka sanduuqa la isku daro, ceelasha waxaa ka buuxsamay dhulka oo la tampered.
Si looga hortago in derbiyada sanduuqa sanduuqa ay ka soo baxaan qalabka la buuxiyay, boostooyinka taageerada ee gudaha waxaa lagu xiraa silig ama ku xiran xiriirka alwaax.
Sariir diiran, oo lagu sameeyey gacanta on cabbiraha kor ku xusan, wuxuu leeyahay mugga yar, sidaas darteed waa in laga buuxiyo arrinta organic guga hore, iyadoo la isticmaalayo lakabka hal oo leh balka:
Qeybta hoose ee sanduuqa waxaa ka buuxsamaya digaam, kaas oo ah in la isku daro si ay u sii wanaagsanaadaan qoyaanka.
Lakabka ugu hooseeya ee 15-20 cm waxay dillaaceen laanta waaweyn, jilif geedka, ciirnaanta gabbaldayaha iyo hadhuudhka, maaddaama ay muddo dheer isku dayi doonaan.
Markaas ka dib lakabka 10 cm ka soo caleemaha geedaha, jaraan cawska, iyo dushooda dalagyada xididka.
Lakabka soo socda waa in laga buuxsho dhadday 2-3 cm.
Lakabka ugu sarreeya waxaa laga buuxiyaa humus, kaas oo lagu qasay dhulka oo wuxuu leeyahay dhumucdiis 10-15 cm, oo kaliya heerka heerka.
Ma jiro liis gaar ah oo ah dalagyada beerta beeraha iyo koritaanka sariiraha diiran. Mulkiilaha kasta wuxuu go'aaminayaa naftiisa in ay aad ugu sahlan tahay koritaanka. Tiknoolajiyadaan waxay u oggolaaneysaa in ay helaan wax-soo-saarka wanaagsan ee dhammaan dhirta beerta waaweyn dhowr jeer xilli. Halkan waxa ku qoran:
Cagaarka hore loo beeray, salaar, radishes. Tani waxay ka baxaysaa qolka qajaarka ama yaanyada, taas oo horumarinaysa wax yar.
Ka dib goosashada cagaarka, lettuce, dabocase, basasha, toon, karootada, xididdo waxaa lagu beeray meelood.
Dhamaadka xagaaga, dalagyada hore ayaa lagu beeray mar labaad.
Ma taqaanaa? Hababka noocan ah ee beerta ayaa ah waxtar maaha oo keliya maadaama sariiraha ay leeyihiin diirimaad gaar ah. Natiijada ka imanaysa sunta biomasska ee sii daaya kulaylka waa bacriminta dabiiciga ah oo si joogta ah u quudisa ciidda kuna cuna maadooyin wax ku ool ah iyo mareellooyin.
Hadda waxaad si ammaan ah u bilaabi kartaa khudaarta sii kordhaysa ee sariiraha diiran. Goosashada wanaagsan!